Herrega Miindaa - Oromia International Bank
Herregni mindaa kan qophaa’e karaa baankiin nama dhuunfaa fi dhaabbileef kaffaltii mindaa raawwachuuf herrega qusannoo gargaarudha.
Tajaajiloota ijoo herrega mindaa
Kaffaltii tokko malee kaardii ATM hojjechiifachuu.
Baankiin hojjettootaaf ji’ati al tokko qofaa kaffaltii raawwachuu danda’a.
Abbaan herregichaa haaldureewwan kanatti aanan hordofuun qarshii taa’e irraa 200% dhalli mijaa’uufii ni danda’a
Inni/Sheen yoo xiqqaate waggaa tooko qusachuu fi qarshiin qusatame 20,000(kuma digdama) qaqqabuu qaba.
Baanikichi taa’e fayyadamuu fi qaamni qaxare akkaataa seera baankiitiin qabeenya dhaabbataa wabummaa qabsisuu qaba.
Hangi qarshii liqaan kennamuu miindaa qaxaramaa tokko sadaffaa qofaa kan kennamu yoo ta’u haata’u malee waliingalaan hanga maallaqa taa’ee 200% kan caalu ta’uu hin qabu.
Hangi turtii liqaa yoo baay’ate waggaa 10 ta’uu danda’a.
Tajaajila Baankii Elektiroonikii